Falanqaynta - Nidaamka Baradhada
Shirkadaha yurub iyo kuwa caalamiga ah ayaa si weyn u kordhiyay soo saarista daawooyinkooda Ruushka - tani waa natiijada sanadka ugu horreeya ee waxqabadka ...
Waqooyiga Hemisphere ee dhulka, celceliska heerkulka xagaaga ayaa ka sarreeyaa caadiga ku dhowaad meel kasta. Qaaradaha, waxa kaliya ee ka reeban waa Hindiya, halkaas oo daruuraha ay ka sii socdaan ...
Covid-19 iyo soosaarayaasha baradhada oo xirxiran: culeyska shaqada oo kordhay iyo caqabado cusub
Mid ka mid ah cawaaqibyada lama filaanka ah ee Cudurka faafa ee COVID-19 ayaa si weyn kor ugu kacay baahida loo qabo miraha iyo khudradda cusub. Natiijo ahaan, soo saarayaal baradho badan oo baakadaysan ...
"Nidaamka baradhada". Waxaan isu keenay aqoonyahanno ka kala yimid adduunka oo dhan
Joornaalka Nidaamka baradhada ayaa la daabacay ilaa 2009. Bishii Feebarwari 2020, joornaalku wuxuu si xoog leh ugu booday bannaanka internetka: wuxuu bilaabay casri cusub ...
Shirkadda Agoosto ayaa qortay cayayaanka ugu khatarta badan ee halista ku ah goynta 2020-ka. Ahmiyada si ...
Azerbaijan waxay dhoofisay baradhada heerar rikoor ah sanadkaan
Agaasimaha Xarunta Cilmi baarista Agrarian ee Wasaaradda Beeraha Firdovsi Fikretzade ayaa arrintan ka hadlay. Wuxuu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo suufka iyo waxyaabaha sababa ...
Dhibaatooyinka qaabdhismeedka xakamaynta sunta cayayaanka ee Ruushka waxay khatar gelinayaan dhoofinta beeraha ee gudaha
Qalabka liita ee shaybaarada guryaha iyo tilmaamaha waqtigiisu sii dhamaanayo ee ay u shaqeeyaan ma ogolaanayaan xakamayn wax ku ool ah tayada sunta cayayaanka ee Russia ...
Suuqa sisinta baradhada ee Ruushka 2019-2020
Sida laga soo xigtay Xarunta Dhaqaalaha Suuqa, suuqa baradhada ee baradhada ee Ruushka wuxuu ku korayaa celcelis ahaan 30% sanadkiiba dhammaadka ...
Khabiiro ku takhasusay FSBI "Rosselkhoztsentr" oo ka tirsan Dhul Xeebeedka Krasnoyarsk ayaa bilaabay tijaabinta baradhada - kormeerida dhirtu si ay u aasaaso daahirnimo badan iyo ...
Sida ku xusan bogga hore ee 'EastFruit portal', sida laga soo xigtay Ururka Raaxeystayaasha ee Jamhuuriyadda Moldova, xitaa xilliga xagaaga in kabadan 60% hantida kaladuwan ee waddanka waxaa ...